Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hawaii na-ahụ mbelata na ego ha nwetara na ọnụ ọgụgụ mmadụ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Achọrọ njem njem mba ụwa ọhụrụ nke Hawaii
Industrylọ ọrụ nkwari akụ nke Hawaii hụrụ mbelata na Septemba RevPAR na ọnụnọ ya na steeti niile ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019, na akụkụ n'ihi nsonaazụ Delta dị iche iche nke mebiri agụụ njem.
Ụlọ nkwari akụ Hawaii RevPAR gbadara 13.5% na Septemba 2021 ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019 n'ihi obere obibi.
Ụlọ oriri na ọ Hawaiiụ Hawaiiụ ka na -edu mba ahụ na RevPAR na ADR.
N'ime ọnwa itoolu mbụ nke 2021, ọrịa COVID-19 na-emetụta arụmọrụ ụlọ nkwari akụ Hawaii na steeti niile.
Ụlọ oriri na ọ Hawaiiụ Hawaii na steeti niile kwupụtara nnukwu ego ha nwetara n'otu ọnụ ụlọ dị (RevPAR), nkezi ọnụego kwa ụbọchị (ADR), na ọnụnọ ha na Septemba 2021 ma e jiri ya tụnyere Septemba 2020 mgbe iwu iche iche nke steeti maka ndị njem n'ihi ọrịa COVID-19 butere ọdịda dị egwu maka. ụlọ ọrụ nkwari akụ. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Septemba 2019, steeti ADR dị elu na Septemba 2021 mana RevPAR dị ala n'ihi enweghị ebe obibi.
Dị ka Hawaii Hotel Performance Report bipụtara site na Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA), RevPAR steeti niile na Septemba 2021 bụ $ 168 (+442.6%), yana ADR nwere $ 304 (+102.7%) yana ọnụnọ nke 55.2 pasent (+34.6 isi ihe) ma e jiri ya tụnyere Septemba 2020. E jiri ya tụnyere Septemba 2019, RevPAR bụ pasentị 13.5 dị ala, Onye bi n'ime ya na-akwalite (-23.8 pasent) nke enweghị ike iwepu ya site na ịbawanye ADR (+23.7%).
John De Fries, onye isi oche HTA na onye isi oche kwuru, "ụlọ ọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ Hawaii nwere mbelata na Septemba RevPAR na ọnụnọ ya na steeti niile ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019, na akụkụ n'ihi mmetụta nke ụdị Delta nke mebiri agụụ njem." "Nke a na -echetara anyị na ọrịa ọjọọ akwụsịbeghị na anyị ga -akpachara anya ka obodo anyị nwee nchekwa na mgbake akụ na ụba n'ụzọ."
Nchọpụta nke akụkọ ahụ jiri data STR, Inc., nke na -eme nyocha kachasị na nke zuru oke nke akụrụngwa ụlọ na Agwaetiti Hawaii. Maka Septemba, nyocha ahụ gụnyere ụlọ 144 nke na -anọchite anya ime ụlọ 46,094, ma ọ bụ pasent 85.4 nke ihe niile na -arahụ na pasent 86.0 nke ihe eji arụ ọrụ ebe obibi nwere ọnụ ụlọ 20 ma ọ bụ karịa na agwaetiti Hawaiian, gụnyere ndị na -enye ọrụ zuru oke, ọrụ pere mpe, na ụlọ nkwari akụ condominium. Agaghị etinye mgbazinye ezumike na ihe nkesa oge n'ime nyocha a.
Na Septemba 2021, ndị njem na-esite na mpụga steeti nwere ike ịgabiga mgbochi ụbọchị iri nke steeti ma ọ bụrụ na a gbara ha ọgwụ mgbochi na United States ma ọ bụ nwee ezigbo ule COVID-10 NAAT sitere na onye otu nnwale tụkwasịrị obi tupu. ọpụpụ ha site na mmemme Njem Nchekwa. Ọgọst 19, 23, Hawaii Gọvanọ David Ige gbara ndị njem ume ka ha belata njem na-adịghị mkpa ruo na ngwụcha Ọktoba 2021 n'ihi mgbanwe Delta nke na-ebute oke nlekọta ahụike steeti.